Chickpeas nge squid kanye ukholifulawa | Ukupheka Kwekhishi
Chickpeas nge squid kanye ukholifulawa
UMaria vazquez | | Ukupheka Kwenhlanzi, Ungadliwa Kwemifino
Izipuni zokudla ziba yinto edingekayo ngalesi sikhathi sonyaka. Ekhaya alikho isonto lapho singalungiseleli khona isitshulu semidumba noma amazambane, enye yezindlela zethu zokupheka eziphindaphindeka kakhulu ama-chickpeas ane-squid nokholifulawa. Ngabe ulinga ukukuzama?
Kuyisidlo esiphelele impela njengoba kufakwe endlebeni efanayo yomdumba, a isisekelo semifino esibalulekile kanye neprotheyini yemvelaphi yezilwane njengomphelelisi. Namuhla sikhethe ukholifulawa njengesithako esiyinhloko, kepha ungasebenzisa lokho onakho ekhaya: i-broccoli, i-romanesco, iklabishi ... futhi kuzosebenza futhi.
Uma uzoba nesibindi sokuyipheka, uzobona ukuthi kulula kakhulu ukwenza lokho. Iphinde ihlale kahle kakhulu efrijini kuze kube yizinsuku ezintathu ukuze ukwazi njalo ukwenza inani eliphindwe kabili futhi ngaleyo ndlela uxazulule isidlo sezinsuku ezimbili somndeni wonke. Uma, njengami, uzama ukwenza lula imenyu, lokhu ngaso sonke isikhathi kuyisu elihle.
Lesi sidlo se-chickpea esine-squid nokholifulawa siphelele, sinempilo futhi siyaduduza. Ilungele lezo zinsuku ezibandayo zasebusika ezizayo.
Uhlobo lweresiphi: I-Verduras
Isikhathi Sokulungiselela: 5 m
Isikhathi Ukupheka: 40 m
Isikhathi esiphelele: 45 m
200 g. amantshontsho
1 anyanisi omhlophe, ugayiwe
2 upelepele oluhlaza okotshani, ogayiwe
1 leek, oqoshiwe
1 upelepele we-cayenne
200 g. izindandatho zesquid
½ ukholifulawa, kuma-florets
1 ingilazi encane katamatisi ochotshoziwe
1 ingilazi yomhluzi wezinhlanzi
Sipheka amantshontsho Embizeni esheshayo enesanqante kanye nengcosana kasawoti ngesikhathi esidingekile sokuba babe nesisa futhi babekele womabili amantshontsho akhishiwe kanye nesanqante kanye nenkomishi yoketshezi lokupheka.
Sishisa izipuni ezintathu zamafutha epanini bese faka u-anyanisi nopelepele cishe imizuzu eyi-10.
Ngemuva kwalokho sifaka ilike bese upheka yonke eminye imizuzu embalwa.
Ngemuva engeza i-squid nekholifulawa kanye nefry imizuzu engu-6.
Faka utamatisi ochotshoziwe, ingilazi yomhluzi wezinhlanzi uma sinayo nosawoti nopelepele. Pheka imizuzu engu-8-10.
Ukuqedela engeza amantshontsho, isanqante echotshoziwe kanye nomhluzi omncane wokupheka uma sikholwa ukuthi kunesidingo (kuzoya ngokuthi siwathanda kanjani kumhluzi) bese upheka imizuzu embalwa ngaphezulu.
Siphaka ama-chickpeas nge-squid ne-cauliflower eshisayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Ungadliwa Kwemifino » Chickpeas nge squid kanye ukholifulawa
Ukholifulawa oshaywe onososo otamatisi obabayo